Samsung kwadoro na ngwugwu nke 7 Galaxy Note na Europe dị oke oke | Akụkọ akụrụngwa
Samsung kwenyesiri ike na ngwaahịa nke 7 Galaxy Note na Europe nwere oke
Samsung eze n'ihu n'ihu ụbọchị ole na ole gara aga 7 Galaxy Note, nke site na izu a enwere ike ịgba akwụkwọ na ọkara ụwa na ọnụahịa nke euro 859. Ọnụahịa ahụ ga-ada n'ahịa ahụ na August 2 ma n'otu ụbọchị ahụ ndị ọrụ merela ndokwa ha ga-amalite ịnata ya. N'oge a na o doro anya na ọnụ ọgụgụ ndoputa agbabaala nke ọma karịa amụma ụlọ ọrụ South Korea nwere.
N'oge a Samsung achọghị inye data gọọmentị, ọ bụ ezie na o kwuola maka mkpa a na-enwetụbeghị ụdị ya, nke dugara ya na-egbu oge ịmalite na Malaysia, Netherlands, Russia ma ọ bụ Ukraine, n'ihi enweghị sotck maka ọkọlọtọ ọhụrụ ya.
Dị ka ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na-enweghị isi, nke na-enyere anyị aka inweta echiche banyere ihe ịga nke ọma nke Galaxy Note 7 a, Ndoputa na Canada ma ọ bụ South Korea dị okpukpu abụọ nke Galaxy S7 na S7 ihu natara n'oge na-adịghị anya. Nke a emeela Conor Pierce, Samsung Vice President maka IT na Mobile maka UK na Ireland ịsị;
Mmeghachi omume ahịa ahụ, yana nzaghachi dị oke mma sitere n'aka ndị na-ekesa anyị na ndị mmekọ, na-egosi na Samsung Galaxy Note7 gafere amụma niile maka mpaghara ahụ site n'akụkụ ụfọdụ sequ
Samsung Galaxy Note 7 bụ ihe ịga nke ọma ugbu a, ọ bụ ezie na oge ọ bụla a na-agbapụta ọ ka mma ichere itinye nkọwa iji gosipụta ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ gọọmentị. Ọ dịghị onye ọ bụla juru anya ịhụ etu ngwaahịa mbụ si mebie, wee hụ ọnụ ọgụgụ ahịa dara oke. Ndị na-emepụta ama amatachala aghụghọ niile ga - ekwe omume, yana ngwaahịa dị mkpụmkpụ na - ekwu na ha biri peeji mbụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na - ekwu nnukwu ihe ịga nke ọma n'ihi na obere ngwaahịa agwụla.
Ikwenye n'ezie na ihe ịga nke ọma nke Galaxy Note 7 na mmalite ya na ahịa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Samsung kwenyesiri ike na ngwaahịa nke 7 Galaxy Note na Europe nwere oke
McDonald's na-enye nri nleba anya ya na Nri Obi .tọ ya
Ngwaahịa nke Nexus 6P malitere ịgba ọsọ ma Google kwenye na ọ gaghị eweghachi ya